Dhageyso:Afhayeenka Shabaab Abu Muscab oo War Yaab leh Ka sheegay Qaraxii Naasa hablood2 | Xaqiiqonews
Dhageyso:Afhayeenka Shabaab Abu Muscab oo War Yaab leh Ka sheegay Qaraxii Naasa hablood2
Afhayeenka ciidanka Alshabab Sh. Cabdi Casiis Abuu Muscab ayaa ka hadlay weerarkii Xoog ku galka ahaa ee Alshabaab ku qaadeen Hotelka NaasaHablood-2 ee magaalada Muqdisho ee lagu laayey madax iyo saraakiil caan ah.
Abuu Muscab ayaa sheegay in gelinkii dambe ee maalintii shaley ay ciidamada Shabaab qaadeen weeraro abaabulan oo isxigxigay kuwaas oo lagu qaaday Hotelka NaasaHablood oo ah Hotel ay dagan yihiin waxa uu ugu yeeray”madaxda murtadiinta” oo aad ugu dhow xarunta madaxtooyada ee Dowladda Federaalka Soomaaliya.
“Hotelkaas wuxuu ahaa goob ay dadka Ahlu-sharta ee murtadiinta ah oo dhan ay isugu tagaan, hadey yihiin xildhibaanada iyo sirdoonka, iyo siyaasiyiinta iyo noocyada kala duwan ee ciidankaba, waxayna ahayd goob ay u qaateen in ay ku nabadgalayaan oo ay isugu yimaadeen” ayuu yiri Abuu Muscab.
Isagoo hadalkiisa sii wata ayuu sheegay in shabaabku ay halkaas u arkeen in ay munaasab tahay in la beegsado si jug fiican loo gaarsiiyo, waxa uu ugu yeeray”cadowga”
“Weerarku wuxuu ku bilowday Camaliyad Istish-haadiya oo uu fuliyey walaal ka mid ah guutada Istish-haadiyiinta. geesigaas oo dhismaha inta badan dhulka la simay, ka dibna waxaa xigay camaliyad Inqimaasi ah oo mujaahidiintu ay ku galeen gudaha Hotelka. Intaas markii ay dhacday ka dib, Maleeshiyaat fara badan oo wata gawaarida tiknikada ah ayaa isku dayey in ay gurmad soo sameeyaan, iyagana Mujaahidiinta ayaa kamiin u dhigay oo qarax kale ayaa qabsaday” ayuu hadalkiisa sii raaciyay.
“Dagaalkaas ay Hotelka gudahiisa ku galeen mujaahidiinta Shaley 11-kii saac wuxuu soo gaaray ilaa saaka subixii aroortii hore, wuxuuna socday 13 saacadood oo xiriir ah. Markii cadowga la gaarsiiyey qasaare aad u fool xun oo dhimasho iyo dhaawac iyo hanti intaba isugu jirta ayey camaliyadu halkaas ku soo afjarantay” ayuu yiri Abuu Muscab.
Mar uu ka hadlayey khasaaraha dhimasho ee dowladda soo gaaray ayuu sheegay in weerarkaas lagu dilay in ka badan 70 ka mid ah dowladda oo isugu jira siyaasiyiin, Saraakiil iyo qeybaha kala duwan ee dowladda Wuxuuna tilmaamay in dhamaantood lagu laayey is qarxinta iyo weerarkii tooska ahaa ee lagu qaaday Hotelka.
Abuu Muscab ayaa sidoo kale sheegay in howlgalka inqimaasiga ah ee saacadaha badan qaatay ay fuliyeen kaliya laba dableey oo inqimaasiyiin ah kuwaas oo muddo 13 saacadood ah halkaas kula dagaalamayey Ciidanka dowladda ee sida gaarka ah u tababran.
“Dagaalkaas 13-ka saacadood soconayey ee Hotelkaas gudihiisa ka dhacayey laba Mujaahid oo kaliya ayey ahaayeen waxa sidaa cadowga u xasuuqay oo loo gali waayey 13-ka saacadood, labadaas mujaahidna halkaas ayey ku shahiideen markii dambe” ayuu yiri Cabdi Casiis Abuu Muscab.
Halkan Ka dhageyso codka Abu Muscab.MP3